. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ဟိုရောက် ဒီရောက် (၅)
တချို့ပြောကြတယ် .. ငါကတော့ သူ့အပေါ် ကောင်းလိုက်ရတာ .. သူကျတော့ ဆိုတာမျိုး .. ဒါဆို သူ့အပေါ်မှာ ကိုယ်က မျှော်လင့်ထားလို့ပေါ့ .. ဒါဆို ကိုယ်က သူ့အပေါ် စေတနာ သန့်သန့်နဲ့ ကောင်းခဲ့တာပါ ဆိုတာ .....
တချို့စကားတွေကို မြန်မာလို ပြောနေပေမယ့် နားမလည်တာတွေက များတယ် .. အပေါ်က စာသားလိုပေါ့ ..
ကိုယ်က သူပြန်ကောင်းဖို့ ကောင်းနေတာ ကောင်းပြနေတာလား .. ဒါကို ဘယ်သူက ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တိတိကျကျ ဝေခွဲပြနိုင်မလဲ .. မလိမ်မညာပဲနဲ့ပေါ့ ..
စေတနာဆိုတာ ရောင်ပြန်ဟပ်တယ် .. ရောင်ပြန်ဟပ်မယ့် စေတနာတွေအတွက် ကိုယ့်စေတနာတွေကို အရင်းအနှီးပြုလိုက်တာလား .. (ဒီညတော့ ဂွကျကျ တွေးပြီး ရေးပြီပဲ .. :D)
ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဘူးတော့ သိသလိုပဲ .. သိသလိုပဲ ပဲရှိသေးတော့ သေချာတယ် မပြောနိုင်သေးပြန်ဘူး ..
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်အပေါ် မချစ်သလိုပဲ .. စာတွေဖတ်တယ် .. ဗေဒင်တွေ ဖတ်တယ် .. အဲဒီမှာတွေ့တယ် .. ကိုယ်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို ပြန်ချစ်လာစေချင်ရင် မျက်နှာကို မြင်အောင် ကြည့်ပြီး မေတ္တာပို့ဖို့ .. လုပ်တာပဲ .. တကယ်လည်း စွမ်းတယ် .. စွမ်းလို့ နောက်ပိုင်း ဒုက္ခဖြစ်ပြန်ရော .. ဘယ်အရာမှ အလွန်အကျွံမဖြစ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ .. မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာလည်း မချင့်ချိန်တတ်ရင် အထားမတတ်ရင် တဖက်က နစ်နာစရာ ဖြစ်တတ်သေးတယ် .. (ရှုပ်တယ်နော် .. :D)
မေတ္တာတရားထားတာ မေတ္တာထားတတ်တာ လူချစ်လူခင်ပေါတယ် .. မေတ္တာထားနိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ .. ဒါပေမယ့် ဖြူစင်သင့်တယ် သန့်ရှင်းနေသင့်တယ် .. ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကို လိုလားတဲ့ မေတ္တာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး .. ငါဒါလေး ပေးလိုက်ရင် သူ့ဆီက ဒါတော့ ပြန်ရမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးပေါ့ .. ဒါက စီးပွားဆန်သွားပြီ ထင်တယ် ..
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ရူးချာချာနဲ့ အကုန်လျှောက်လုပ်ဖူးတယ် .. ရီလည်းရီရတယ် .. ခုကျတော့ ရီစရာပေါ့နော် .. အချိန်က လူကို ရင့်ကျက်စေတယ် .. ခုတော့ ပေါချာချာ အလုပ်တွေ မလုပ်မိအောင် ကြိုးစားနေတယ် .. ဒါတောင် တချက်တချက် .......
ဘာတခုမှ ရယူပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ် မရှိတော့ရင် ပိုင်ဆိုင်ချင်စရာ မကောင်းတော့ရင် ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းနေမလား .. မက်မောစရာတွေ ရှိနေလို့ပဲ လူတွေ ပူလောင်နေကြတာလား .. အပူဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ရှာတာထင်ပါရဲ့ ..
တခါတခါ စိတ်က လူနောက်ကို လိုက် .. တခါတခါ လူက စိတ်နောက်ကို လိုက် ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 1/29/2010 12:09:00 AM